Deluxe Suite Ulwandle olwandle - Amafulethi Iyaqashisa e-Rimini, i-Italy
Deluxe Suite Ulwandle olwandle
Izivakashi ezingu- 8 · ikamelo lokulala 1 · imibhede engu-5 · Igumbi lokugezela elilodwa
Leli fulethi linamagumbi anombhede ophindwe kabili nombhede ongashanela kuwo, igumbi lokuhlala elinekhishi elihlomile, itafula lokudlela, imibhede emibili kasofa yabantu abane. Igumbi lokugezela elikhulu elinendawo yokuhlanzeka emile, okugeza okuhamba kuyo okunekristalu engaguquki njll. Efulethini uzothola ikhithi yelineni lokulala, amathawula, i-Super Fi esheshayo, ikhishi ifakwe izitsha, izingilazi, ukusikwa nokukhonkotha, isimo esishisayo / esibandayo somoya, i-smart TV, i-Netflix.
Ifulethi linamagumbi anombhede ophindwe kabili nombhede ongashanela kuwo, igumbi lokuhlala elinekhishi elihlomile, itafula lokudlela, imibhede emibili kasofa yabantu abane. Igumbi lokugezela elikhulu elinendawo yokuhlanzeka emile, okugeza okuhamba kuyo okunekristalu engaguquki njll. Efulethini uzothola ikhithi yelineni lokulala, amathawula, i-Super Fi esheshayo, ekhishini ifakwe izitsha, izingilazi, ukusikwa nokukhamba, isimo esishisayo / esibandayo somoya, i-smart TV, i-Netflix, i-Sat TV.
Ukungena okuzimele okunamakhadi kazibuthe.
Leli fulethi linamagumbi anombhede ophindwe kabili nombhede ongashanela kuwo, igumbi lokuhlala elinekhishi elihlomile, itafula lokudlela, imibhede emibili kasofa yabantu abane. Igumbi lokugezela elikhulu elinendawo yokuhlanzeka emile, okugeza okuhamba kuyo okunekristalu engaguquki njll. Efulethini uzothola ikhithi yelineni lokulala, amathawula, i-Super Fi esheshayo, ikhishi ifakwe izitsha, izingilazi, ukusikwa nokukh… funda kabanzi
Azikho izitebhisi zokungena
Indlela engenanqenqema ukuya endaweni yokungena
4.63 (izibuyekezo ezingu-8)
I-Rivabella iyisifunda esiphakathi neRimini esikuvumela ukuthi uzungeze yonke i-Adriatic Riviera, kanye nokusondela kakhulu enkabeni yedolobha kanye ne-Fair. Umbukiso ophambi kwefulethi ngesikhathi kusihlwa uba yindawo yokuhamba ngezinyawo eqala ngo-8: 30 kusihlwa kuze kube ngu-12.00 pm uvumela ukuhamba nokuthenga.
I-Rivabella iyisifunda esiphakathi neRimini esikuvumela ukuthi uzungeze yonke i-Adriatic Riviera, kanye nokusondela kakhulu enkabeni yedolobha kanye ne-Fair. Umbukiso ophambi kwefulethi ngesikhathi kusihlwa uba…
Siphatha ihhotela kude nemizuzu engu-15 futhi siyohlala sitholakala kunoma yiziphi izidingo zezivakashi.
Ukuhlala kwesikhathi eside (izinsuku ezingu-28 noma ngaphezulu) kuvunyelwe